Nin markii u horreysay loo tallaalay xubinka taranka iyo dahaadhka xiniinyaha - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka JOHNS HOPKINS MEDICINE
Image caption Dr Andrew Lee oo ah qofka labaad marka bidix laga tiriyo iyo kooxdiisa jaamacadda Johns Hopkins University
Dhakhaatiir Maraykan ah ayaa markii ugu horraysay si buuxda ugu guulaystay in ay nin ku tallaalaan xubinka taranka iyo dahaadhka xiniinyaha oo uu ku tabarucay qof dhintay.
Waxay isticmaaleen xubinta taranka iyo dahaadhka xiniinyaha iyo qaybo uurkujirta ka mid ah oo uu ku deeqay qof dhintay.
Kooxdan oo 11 dhakhtar ka kooban ayaa xubinka taranka tallaalay 26 bishii Maarso waxayna ku qaadatay 14 saacadood.
Waa markii koobaad ee qaliin noocan ah lagu sameeyo askari dagaal ku dhaawacmay, waana markii koobaad ee la tallaalo xubnaha taranka iyo kuwa kale ee ku xeeran ee uurkujirta oo wada socda.
"Inkastoo ay muuqdaan dhaawacyada waawayn ee jirka kala gooya maadaama ay curyaanimo keenaan, haddana dhaawacyada dagaallada ka dhasha qaarkood way qarsoon yihiin saamayn wayn ayayna leeyihiin, balse dad badan kama garaabaan," ayuu yiri Dr WP Andrew Lee oo madax ka ah qaybta qalliinnada noocan ah.
Dr Lee ayaa intaas ku daray in dhaawacyad xubnaha taranka soo gaara "xilliyada dagaalka ay yihiin kuwo aan laga hadlin".
Dr Rick Redett ayaa isna sheegay in bukaanku uu hadda soo kabanayo isbitaalkana laga saari doono toddobaadkan.
Nin asagoo qalliin ku jira gitaar garaacanayey
Askariga oo doonaya in aan magaciisa la shaacinin ayaa sheegay "in markii u horraysay ee uu toosay uu dareemay in uu caadi yahay, hadda caadi ayaan ahay."
"Rajadanadu waa in tallaalkan uu sare u qaadi doono in uu si caadi ah u kaajo, dareenkii shahwadana uu u soo laabto, ayuu yiri Dr Redett, waxayna rajaynayaan in ay dadkale oo ay ku haboon tahay u sameeyaan.
Kooxda qalliinkan samaysay ayaa sheegtay in jaamacaddu ay meelmarisay in ay samayso 60 qalliin oo noocan oo kale ah oo barnaamijkan qayb ka ah.